Namichi osoo cuuphamaa jiruu bishaan nyaate - BBC News Afaan Oromoo
Namichi umuriin isaa ganna 20 ta'e wayita paasteriin laga bishaan kibba magaalaa guddoo Gaanaa Akiiraatti argamutti cuuphaa jirutti bishaaniin liqimfame.
Akka viidiyoo miidiyaalee hawwaasummaa irratti daddabarfamaa jirutti, namni maqaan isaa , Yaw Kyeremeh jedhamu qarqara bishaan Deensuu jedhamu teessisuun yeroo paasteriin bishaan keessa gadi isa galchuu agarsiisa.
Kadhannaa yeroo mursaan booda marsaa lammaffaa bishaan keessa gadi akka seenu taasifamee garuu bishaan keessaa deebiyee hin baane.
''Dhugaa waan nutti fakkaateef ililchaa wajjiin kaane''
akka dubbi himaan poolisii kan naannoo Akkiiraa Afia Tenge BBC'tti himetti paasteriin reefuu muuxannoo guddaa hin qabne kun bakkuma sanatti to'annaa jala oolee paasteriin gameessi waldaa amantichaa sanaa cuuphaa sana keessaa harka qabu jedhamu poolisiin barbaadamuun itti fufee jira.
Bishaaniin liqimfamuun Dilbata uumame kun akka namoonni hedduun yeroo ayyaanota amantaa lubbuun maaliif darba jedhanii akka gaafatan taasiseera.
Maatiin namicha lubbuun darbee kun miidyaa biyya keessatti akka himanitti bishaaniin nyaatamuu ilma isaanii kanaatiif eenyuunuu hin komannu jedhan.
Akka poolisiin jedhutti namicha umurii waggaa 20 lubbuun darbe kana sirna awwaalchaaf qopheessaa kan jiran yommuu ta'u reeffi isaa garuu osoo hin awwaalamiin dura qorannoon gaggeeffamuun barbaachisaadha jedheera.
Yeroo darbe Itoohpyaa naannoo Aarbaa Mincitti naachi paasterii amantoota cuuphaa jiru tokko akka nyaate BBC'n gabaasee ture.
Kuusaa Fakkii Kabaja ayyaana cuuphaa 2018 suuraan